၀ တ်စုံအိတ်များပါ ၀ င်သည့် Gorgeous Design Multicolor Rhinestone မြင့်မားသောဒေါက်မြင့်လက်ကိုင် Crystal မင်္ဂလာဆောင် Pump များ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ။ WoopShop®
လူ့လက် Crystal သတို့သမီးဝတ်စုံကိုက်ညီမှုရှိသည့်အိတ်နှင့်အတူညှစ်ထုတ်လိုက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်းရောင်စုံ rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်
$180.49 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $237.49
ဖိနပ်ကိုအမေရိကန် Size ကို4(22cm)5(22.5cm)6(23cm) 6.5 (23.5cm)77.5 (24cm) 8 8.5 (24.5cm)9(25cm) 9.5 (25.5cm) 10 (26cm) 10.5
တင့်တယ်သောဒီဇိုင်း Multicolor Rhinestone ဒေါက်မြင့်ဒေါက်မြင့်လက်ကိုင်အိတ် - လိုက်ဖက်သောအိတ် -4(22cm) backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
item အမျိုးအစား: ဘုံဘိုင်
တိုး Shape: round တိုး
ဖနောင့်အမြင့်: မြင့်သည် (၃ လက်မနှင့်အထက်)
အလှဆင်: rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်
သားရေပုံစံ: soft သားရေ
pump အမျိုးအစား: အခြေခံပညာ
တိုးပုံစံ: round တိုး
အထုပ်ထဲ၌ပါဝင်သည့်အရာ - ဖိနပ်တစ်စုံနှင့် clutch အိတ်
description: 1. အရောင်: Multicolor 2. အပေါ်ယံပစ္စည်း: စစ်မှန်သောသားရေ 3. နံရံပစ္စည်း: စစ်မှန်သောသားရေ 4. ခြေချောင်းပုံစံ: လည်ပင်းခြေချောင်း 5. အလှဆင်: Rhinestone, Crystal 6. ရရှိနိုင်သောအရွယ်အစား: US 4, US 5, US 6, US 6.5, US 7, US 7.5, US 8, US 8.5, US 9, US 9.5, US 10, US 10.5 7. Heel Height: ဒေါက်အမြင့်သုံးမျိုးကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ 3cm / 10 လက်မ၊ ရှေ့မျက်နှာပြင် 3.9cm /2လက်မ၊ 0.8cm / ၄.၇ လက်မ၊ ရှေ့မျက်နှာပြင် 12cm / 4.7 inches ရှိပလက်ဖောင်းများ၊ 3cm / 1.18 လက်မ၊ ရှေ့ 14cm / ၁.၅၇ လက်မရှိပလက်ဖောင်းများ၊ ၈ လက်ကိုင်အိတ်အရွယ်အစား - ၁၈ စင်တီမီတာ / ၇ လက်မအရှည်၊ ၁၁ စင်တီမီတာ / ၄.၃ လက်မအမြင့်; 5.5cm /4လက်မအကျယ် Size ကိုဇယား: